एडिसनका दुई हजार प्रयोग ! - Safal Stories
Home Short Stories एडिसनका दुई हजार प्रयोग !
बिजुलीको बल्बका आविष्कारक थोमस एल्वा एडिसनले बिजुलीको बल्ब बनाउने क्रममा बल्बको लागि चाहिने फिलामेन्टको खोज गर्न थाले। फिलामेन्टको खोजको लागि उनले पटक-पटक गरि दुई हजार किसिमका सामान प्रयोग गरे। तर पनि फिलामेन्ट पत्ता लगाउन सकेनन् । कुनै पनि प्रयोग सन्तोषजनक नभएपछि उनका सहायकले भने , ” यति धेरै मेहनत गरेतापनि हामीले केही प्राप्त गर्न सकेनौं। हाम्रो सबै मेहनत खेर गयो। न हामीले केही पायौं, न केही सिक्यौं ।”
त्यसपछि एडिसनले भने, ” हामीले धेरै लामो यात्रा गरेर सफलताको नजिक आएका छौं। हामीले अब थाहा पाएका छौं की यस्ता दुई हजार सामान छन्, जसलाई हामीले बल्ब बनाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनौं । ”
गल्ती तिमी असफल हुनुको संकेत होइन । कुनै गल्ती नै बिना न केही आविष्कार भएको छ न त कुनै विचारधारा नै जन्मिएका छन्। अरुले गरेको गल्ती र आफूले गर्ने गल्ती सबैलाई आफूले अब चाल्ने पाईलाको लागि पाठ बनाऊ, मार्गदर्शक बनाऊ। असफलता र गल्तीलाई आफ्नो निराशाको कारण होइन, सफलताको कारण बनाउन प्रयत्न गर।
Previousसकारात्मक सोँचको लागि प्रेरक भनाइहरु
Nextसात कक्षामा पढ्ने केल्बिन संग्रौलाले बनाए ड्रोन